Jenesis 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
15 Mgbe ihe ndị a gasịrị, okwu Jehova ruru Ebram ntị n’ọhụụ,+ sị: “Atụla egwu,+ Ebram. Abụụrụ m gị ọta.+ Ụgwọ ọrụ gị ga-adị nnọọ ukwuu.”+ 2 Ebram wee sị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, gịnị ka ị ga-enye m, ebe ọ bụ na amụtaghị m nwa, onye ga-eketa ụlọ m bụ Elịiza, onye Damaskọs?”+ 3 Ebram kwukwara, sị: “Lee! Ọ dịghị mkpụrụ i nyere m,+ lee! ọ bụkwa nwa+ ụlọ m ga-anọchi m dị ka onye nketa.” 4 Ma, lee! Jehova gwara ya okwu ndị a, sị: “Nwoke a agaghị anọchi gị dị ka onye nketa, kama ọ bụ onye ga-esi n’ahụ́ gị pụta ga-anọchi gị dị ka onye nketa.”+ 5 O wee kpọpụta ya n’èzí wee sị: “Biko, lelie anya n’eluigwe gụọ kpakpando ndị a ọnụ, ma ọ bụrụ na i nwere ike ịgụta ha.”+ O wee gaa n’ihu ịsị ya: “Otú a ka mkpụrụ gị ga-adị.”+ 6 O wee nwee okwukwe n’ebe Jehova nọ;+ o wee gụọrọ ya nke ahụ dị ka ezi omume.+ 7 Ọ gwakwara ya, sị: “Abụ m Jehova, onye kpọpụtara gị n’obodo Ọọ nke ndị Kaldia ka m wee nye gị ala a ka ọ ghọọ nke gị.”+ 8 O wee sị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, gịnị ka m ga-eji mara na m ga-ewere ya ka ọ ghọọ nke m?”+ 9 O wee sị ya: “Wetara m nwa ehi gbara afọ atọ na nne ewu gbara afọ atọ na ebule gbara afọ atọ na nduru na nwa kpalakwukwu.”+ 10 O wee weta ihe ndị a ma bọwaa ha abụọ abụọ wee debe akụkụ ha nke ọ bụla ka ha chee ibe ha ihu, ma ọ bọghị nnụnụ ndị ahụ abọ.+ 11 Nnụnụ ndị na-eri anụ wee malite ibekwasị n’ozu+ anụ ndị ahụ, ma Ebram nọ na-achụpụ ha. 12 Mgbe nwa oge gasịrị, anyanwụ chọwara ịda, oké ụra wee buru Ebram,+ ma, lee! oké ọchịchịrị na-emenye ụjọ kpuchiri ya. 13 O wee malite ịsị Ebram: “Ka o doo gị anya na mkpụrụ gị ga-abụ ndị mbịarambịa n’ala na-abụghị nke ha,+ ha ga-agbakwara ha ohu, ndị a ga-emekpakwa ha ahụ́ ruo narị afọ anọ.+ 14 Ma m ga-ekpe mba ha ga-agbara ohu ikpe,+ e mesịakwa, ha ga-eburu ọtụtụ akụ̀ pụọ.+ 15 Ma gị onwe gị, ị ga-agakwuru nna nna gị hà n’udo; a ga-elikwa gị mgbe i meworo ezigbo agadi.+ 16 Ma n’ọgbọ nke anọ, ha ga-alọghachi n’ebe a,+ n’ihi na njehie ndị Amọraịt ezubeghị.”+ 17 Ugbu a, anyanwụ adawala, oké ọchịchịrị wee gbaa, ma, lee! oké ọkụ na-akwụ anwụrụ na ọwa ọkụ na-enwu enwu gafere n’agbata anụ ndị ahụ.+ 18 N’ụbọchị ahụ, Jehova na Ebram gbara ndụ,+ o wee sị: “Ọ bụ mkpụrụ gị ka m ga-enye ala a,+ malite n’osimiri Ijipt ruo n’osimiri ukwu, bụ́ osimiri Yufretis:+ 19 ndị Kenaịt+ na ndị Kenizaịt na ndị Kadmọnaịt 20 na ndị Het+ na ndị Perizaịt+ na ndị Refeyim+ 21 na ndị Amọraịt na ndị Kenan na ndị Gegash nakwa ndị Jibọs.”+